Nezvedu - Cangzhou Ruichen Electronic Equipment Co, Ltd.
RuiChen Magetsi Zvishandiso Co, Ltd. Iyo yakavambwa muna 2003. Iyo yepasirese mutengesi anoshanda muR & D 、 kugadzirwa uye kutengesa kweakataridza makabati. Iyo kambani ine huwandu hwakazara hwekudyara hwemamirioni makumi matanhatu nemashanu uye inovhara nzvimbo inosvika zviuru makumi maviri nezvishanu zvemamirimita. Kambani yedu yakashongedzerwa neyemberi yekugadzira michina, yekutanga-kirasi dhizaini uye timu yekusimudzira uye inonyanya kushanda mushure mekutengesa sevhisi. mhando yezvigadzirwa zvinoenderana nematanho emunyika, uye mitengo yezvigadzirwa ndiyo yakadzikira muindasitiri. Zvigadzirwa zvekambani zvinonyanya kusanganisira kufa-kukanda aruminiyamu kabati, yekunze simbi isina mvura cabinet, aluminium mbiri yekurenda kabhodhi, nhandare screen screen, light pole screen cabinet, rakakombama cabinet, column screen cabinet nezvimwe zvigadzirwa. Kambani yedu yakagadzika kudyidzana nemakambani mazhinji anozivikanwa seQiangli, Lijing uye Ruiling.
Ruichen muridzi yepamusoro nyika otomatiki kugadzirwa zvivakwa uye nyanzvi R&D timu, yakajairwa kugadzirwa manejimendi, mhando yepamusoro zvigadzirwa uye kutengesa kwakakwana uye timu timu. Ruichen inotsigira girini, yakaderera kabhoni, kuchengetedza simba, uye pfungwa yekuchengetedza zvakatipoteredza. Ruichen akahwina "Hebei Anonyatso kuzivikanwa Mhando", akapfuura ISO9001 kuratidza mhando manejimendi sisitimu, FCC, CE, uye zvimwe zvinodiwa chitupa.
Vatengi vadzidzisi vedu, uye kushanda pamwe navo kunotipa mikana yakawanda yekudzidza yekuvandudza yedu yega yehunyanzvi nhanho uye manejimendi danho, rinova simba rinotungamira mukugadzira kwedu nekusimudzira. Iyo kambani inonamatira kune tenet ye "ita zvese zvinobvira kugadzira zvigadzirwa zvinosangana nevatengi zvinotarisirwa uye zvinodikanwa" uye zvinotevedzera kune bhizinesi uzivi hwe "iyo fekitori inogadzira kwete zvigadzirwa chete, asi zvakanyanya kukosha, mukurumbira uye mhando", uye inogara ichitora matekinoroji matsva. uye inounza michina mitsva yekuita Iyo mari yekambani mabhenefiti ari kuwedzera. Zvinotendwa kuti kambani haizombomira kuongorora nekuvandudza, uye kufambirana nekuvandudzwa kwemakambani epamba uye epasi rose.